Mazava loatra fa tsy ankasitrahan’izy ireo ny fanasaziana ara-bola azy ireo ary indrindra koa ny fanilihana rihitra any amin’izy ireo ihany. Arak’izany dia vao mainka mihenjan-droa ny tady eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina amin’ity resaka solika ity. Tsy mbola tena azo heverina tanteraka, raha jerena amin’io lafiny io, ny tsy hiverenan’iny krizy niainana tamin’ny herinandro teo iny.
MAMONO OLONA NY HAFANANA
Manomboka mamono olona amin’izay ny hafanana mihoatra ny tokony ho izy. Tao an-drenivohitr’i Vakinankaratra no fantatra fa nisy namoy ny ainy. Ramatoa iray vao avy niasa ka nandeha taksibe no nitsitra tao. Tsy nisy nahafantatra izy ary nentina teny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly. Tsy mbola zatra hafanana toy izao ny Malagasy. Hatreto anefa dia tsy misy fampahafantarana izay tokony hatao na koa ny tokony hatonina raha misy voina mifandraika amin’izany. Dia samy miaina izay zakany eny fotsiny.
FANDROBANA TENY AMBOHIJANAKA
Telo lahy no nandroba tetsy Ambohijakana indray. Lasa hatramin’ny peratra mariazy omaly vao maraim-be rehefa nidiran’ireo olona an-keriny tao amin’ilay tokantrano. Ny fahitalavitra, ny finday ary ny firavaka no tena nanintona voalohany ireo olon-dratsy izay nitondra basim-borona. Mba tsy namaly anefa ny tompon-trano fa nanaraka ny sitrapon’ireo olon-dratsy ary tsy nisy ny aina nafoy na koa ny faharatràna. Faritra mena amin’ny asan-jiolahy hatrany Ambohijanaka na dia efa maka fepetra ny manidy tsena sy mody amin’ny dimy hariva aza ny mponina.
RONGONY NATSOFOKA TANATY FIVAVIANA
Natsofoka tany anaty fivaviana ireo zava-mahadomelina mahery vaika antsoina hoe cocaine. Vehivavy malagasy roa no nokaramain’ireo afrikanina izay nizeriana sy ivoariana mba hanafotsohana izany ary hitatitra ireo entana any Seychelles. Nisy anefa ny tsy fifanarahana tampoka ary dia tonga hatreny amin’ny polisy ny feo mahakasika ity trafika iray ity. Nentina teny amin’ny fampanoavana izy efatra omaly ary naverina teny amin’ny polisy misahana ny ady amin’ny rongony mandra-pahatonga ny alakamisy izay hihainoana azy ireo manaraka.
MPITARIKA FIVAVAHANA NAMONO OLONA
Mpitarika fivavahana ao amin'ny fiangonana iray etsy Alatsinainy Imerimandroso no namono ny mpiasany tao an-trano. Tratrany nangalatra voan-kafe ilay mpiasa ka nodarohany tamin'ny vy. Tsy tana intsony anefa ny ain'ilay mpiasa rehefa noratrany teo amin'ny lohany.Tazomina ao amin'ny zandary ao Imerimandroso ity katekista sy ny mpiasany roa hafa momba ity raharaha ity. Mahoraka eraky ny tanàna ity raharaha ity ary arahin’ny olona maso tanteraka.
Mijaly rano tanteraka ny mponina eny Tsarahonenana sy ny manodidina. Adiny iray ihany sisa no mandeha ny rano ao anatin’ny andro iray ary amin'ny alim-be vao mba miverina kely. Tsy vitan’izany fa filaharam-be no hita eny amin'ny paompy no aterak’izany ary matetika mikorontana mihitsy ireo mpatsaka rehefa tsy mahazo rano. Korontana sy adin-tsaina arak’izany no iainan’ny olona eny an-toerana noho ny tsy fisian’ny rano sy ny hetraketraky ny Jirama.
Tsy mety afa-po amin'izay eo mihitsy ilay minisitry ny serasera amin'ny fanoloram- baovao ao amin'ny fahitalavitra TVM. Hikarakara fifaninanana indray ny minisitera itadiavana mpanolotra vaovao amin'ny haino aman-jery. Miendrika fanilihana ireo mpiasa izay mbola maro be ny tanora sy mahavita azy ao amin'ny haino amanjerim-panjakana ny zava-mitranga ary famakiana ady tsotr’izao.